Aretin'ny aretina sy trondro | Fiaretana haran-dranomasina
Ny aretina trondro ambolena dia ahiana hampidi-doza ho an'ny tontolo iainana sy ireo mpiompy trondro. Cages tsy voadio tsara na voatazona tsara, mitahiry hazandrano amina haavo tsy maharitra ny trondro, mamela trondro maty ao anaty tranom-borona, tsy madio ny kalitaon'ny rano, ary tsy manome sakafo ara-dalàna sy fampinonoana sakafo ny sasany amin'ireo antony mety hiteraka aretina trondro. Ny aretina dia mety atahorana ho an'ny karazana trondro dia satria ny rano misokatra misy ny tranom-borona dia lalana mety hamindrana ny aretina avy ao anaty tranom-borona mankany amin'ny tontolo an-dranomasina akaiky. Raha tsy voadinika ireo aretina ao anatin'ny trondro nambolena dia mety hiparitaka amin'ny trondro dia.
Ny aretina dia mety hisy fiatraikany lehibe amin'ny fitomboana sy ny toetoetran'ny trondro ao anaty tranom-borona amin'ny alàlan'ny fampihenana ny fitomboana, ny fitomboan'ny fahasembanana, ny fitomboan'ny mety maty, ny fampitomboana ny fotoam-pijinjana ary ny fihenan'ny biomassa sy ny tombom-barotra. Miorina kokoa amin'ny lafiny toekarena sy tontolo iainana hisorohana aretina fa tsy hanalefaka ny fiparitahan'ny aretina efa niseho. ref
Fifandraisana amin'ny tontolon'ny mpampiantrano, ny pathogen ary ny fihenjanana amin'ny fisian'ny aretina. Loharano: misokatra amin'ny varavarankely vaovaoIlay toerana misy trondro
Density amin'ny stocking
Hevitra iray manan-danja tokoa tokony ho fantatra amin'ny fiompiana anaty hazandrano anaty hazandrano ny haavon'ny tahiry, izay ny lanjan'ny trondro ao anaty tranom-borona iray. Ny lanjany dia matetika omena amin'ny kilao ary ny haben'ny tranom-borona amin'ny metatra toratelo. Ohatra, ny penina mitsingevana misy refy 5 x 5 x 3 metatra (L x W x H) dia mety ho 75 metatra toratelo ny volany, ary mety ho trondro 2,000 trondro 100 g avy ny tsirairay. Raha 200,000 200 g na 2.6 kg ny lanjan'ny trondro, na biomassa, dia trondro 1 kg isaky ny metatra toratelo isaky ny metatra toratelo.
Ny karazana tranom-borona tsirairay, ny karazany ary ny tontolo iainana dia mamela ny hakitroky ny stocking isan-karazany, fa ny fitsipika ankapobeny dia ny fifandraisana tsy misy ifandraisany amin'ny hakitroky sy ny fitomboan'ny tahiry - arakaraka ny maha-ambany ny hakitroky ny tahiry no vao maika hitombo ny trondro. Ny hakitroky ny kaontenera avo kokoa (trondro marobe hita ao anaty tranom-borona) amin'ny ankapobeny dia hampitombo ny adin-trondro amin'ny ankapobeny ary mety hampitombo ny fihanaky ny aretina sy ny katsentsitra. Mila fandaminana tsara, fandinihana ary fitahirizana firaketana izany mba hahitana ny hamaroan'ny tahiry tsara indrindra ao anaty tranom-borona manokana. ref
Ampiasao ny hakitroky ny tahiry ambany mba hampiroboroboana ny fitomboana ary hampihenana ny adin-tsaina sy ny aretina
Ahenao kely ny fikirakirana trondro
Araho maso matetika ny tranom-borona mba hahitana famantarana ny fihenjanan'ny trondro sy / na ny aretina ary ampifanaraho amin'izany ny hakitroky ny stocking
Araho maso ny tranom-borona ary esory avy hatrany izay mety maty
Fanadiovana tranom-borona sy fikojakojana
Ny fanadiovana ny tranom-borona sy ny harato dia tokony atao matetika eo anelanelan'ny fiotazana sy rehefa ilaina. Miankina amin'ny tranokala voafantina, matetika ny harato dia hanangona “biofouling” na kofehy voajanahary avy amin'ny tontolo iainana amin'ny algôma, spaonjy na haran-dranomasina aza. Ny fanangonana ireo zavamananaina an-dranomasina amin'ny harato dia afaka mampihena ny fikorianan'ny ranomasina ao anaty tranom-borona ary mampihena ny famenoana oksizenina sy ny fanesorana fako mahomby. Ho fanampin'izany, ny katsentsitra izay afaka maniry sy mihinana ireo karazana kolontsaina dia afaka miraikitra amin'ny fitaovana sy harato. Mila mifampiresaka tsy tapaka momba ny fikojakojana ny harato sy ny fanadiovana ny mpitantana sy ny mpandraharaha satria ny tsy fidiovana sy fikolokoloana dia mety hiteraka lavaka sy fahatapahana koa, izay mety hitsoaka ny trondro ary hihena ny vokatra. ref
Ny fikojakojana mahazatra dia mazàna dia ahitana lambam-borosy ao anaty rano rehefa tsy misy eo anelanelan'ny tahiry ny harato. Ny fanadiovana tanteraka sy feno dia mety ahitana ny fanesorana ireo harato ao anaty tranom-borona sy ny fanadiovana azy ireo an-tanety amin'ny alàlan'ny famelana azy ireo ho maina eto ambanin'ny masoandro mandritra ny fotoana maharitra, ny famafazana azy ireo amin'ny fantson-dranomandry mahery vaika, na ny fitsaboana azy ireo amin'ny zavatra simika manokana. Zava-dehibe ny famonoana sy fanesorana araka izay azo atao ny fitomboan'ny ranomasina ary famaohana tanteraka ny simika rehetra alohan'ny hametrahana anaty harato sy tranom-borona ao anaty rano. Ankoatry ny fanadiovana amin'ny harato ary miankina amin'ny karazana tranom-borona, ny rafitra mitsingevana sy ny lampihazo dia tsy maintsy tompoina ihany koa.
Araho ny fandaharam-potoana mahazatra amin'ny fanaraha-maso sy fitazonana ny harato sy ny tranom-borona
Ahenao kely ny fampiasana akora simika sy antimicrobial amin'ny alàlan'ny fanadiovana harato amin'ny alàlan'ny borosy sy ny fantsona avo lenta
Hamarino tsara fa ny sambo fiompiana ampiasaina mba hiasa na hanara-maso ny toeram-piompiana dia tazonina mba hisorohana ny solika na ny fivoahan'ny solika na ny fandrobana
Ny fampiasana trondro iray manontolo, fanapahana trondro na faritra biby hafa hamahanana ireo trondro ao anaty tranom-borona dia tena kivy. Ity karazan-tsakafo ity dia tsy maharitra, tsy mitondra toekarena ary mety hisy vokany maharitra sy manimba amin'ny tontolo iainana. Fa kosa, ny fanomezana sakafo ny trondro miaraka amina paompy famokarana novokarina dia aroso. Ny pellets dia manana singa ilaina amin'ny sakafo mba hampiroboroboana ny fitomboana, ny fahavelomana ary ny toetoetran'ny trondro nohafaina miaraka amin'ny fandanjana proteinina, lipida, angovo, mineraly ary vitamina. Miankina amin'ny karazan-javamaniry any am-piompiana dia mety misy ny famahanana noforonina sy notsapaina ho an'io trondro manokana io. Zava-dehibe ny fandinihana ny fitondran-trondro famahanana ny trondro mba hisorohana ny famohana be loatra. Raha miseho ny fisotroan-toaka be loatra, dia milentika any amoron-dranomasina mety hanimba ny fonenan'ny benthic ny pellets tsy mihinana. Ankoatr'izay, ny famahanana rehetra izay tsy lanin'ny trondro nohafarana dia nandany vola fotsiny - ny famaritana ny fahombiazan'ny sakafo dia fandresena azon'ny tantsaha sy ny tontolo iainana. ref
Mampiasà pellet manokana fa tsy trondro na biby feno biby hatao sakafo
Araho akaiky ny famahanana sy ny fanitsiana ny protokolom-piterahana mba hampihenana ny sakafo tsy lany lanina tsy lany
Ny fahasalaman'ny trondro dia mety hisy fiantraikany amin'ny tontolo iainana, sakafo, ary areti-mifindra. Andraikitry ny mpandraharaha sy mpitantana ny toeram-piompiana ny manara-maso ny fahasalaman'ny biby kolontsaina manomboka amin'ny nendasina izay novidiana ka hatramin'ny trondro izay ambolena sy nojinjaina. Raha vantany vao tsikaritra ny fihetsika ratsy na ny toetra ara-batana dia tsy maintsy atao ny hetsika haingana hamaritana sy hamahana ilay olana ifotony. Raha tsy manana fiofanana ara-teknika ilaina ny mpandraharaha na ny mpitantana mba hanombanana tsara sy hanasitranana ireo aretina mety hitranga, dia andraikitry ny mpandraharaha sy ny mpitantana ny mitady fanampiana. Ny veterinera an-drano anaty rano dia azo aseho amin'ny porofo hita maso (sary na horonan-tsary) mba hahafahan'izy ireo manome tolo-kevitra.
Hamarino tsara fa ny fotodrafitrasa izay nendasina ny fry dia tsy mitoetra amin'ny alàlan'ny kaonty fanalefahana aretina mety ary tsy misy aretina ireo trondro voaray.
Araho maso tsy tapaka ny filomanosana trondro sy ny sakafo ary tandremo ny fihetsika tsy mahazatra satria mety hanondro aretina na fahasalaman'ny trondro
Raha voamarina ny aretin'ny aretina dia mifandraisa amina manam-pahaizana momba ny fahasalamana anaty rano na mpitsabo biby mba hahitana ny aretina manokana sy ny fitsaboana sahaza azy.
Raha azo atao, manatona amin'ny manam-pahaizana momba ny fahasalamana anaty rano na mpitsabo biby amin'ny ambaratonga maro samihafa amin'ny asa sy / na ampiasao iray ho isan'ny ekipa miasa.
Ahenao kely ny fampiasana ary alao antoka fa simika ara-dalàna sy antibiotika ihany no ampiasaina
Vaksinina ny trondro alohan'ny hametrahana ao anaty tranom-borona, raha misy ary ilaina izany
Ny elanelana misy eo amin'ny asa fiompiana
Ny torolàlana sy ny hafainganan'ny onja dia mamaritra ny làlana sy ny fako malaky nesorina tao anaty tranom-borona ary mety ho entina ao anaty tranom-borona mifanila aminy. Ny torolàlana ankehitriny dia mety hidika ihany koa fa ny tranom-borona sasany dia harahin'ny rano misy atiny oksizena avo kokoa, miaraka amin'ireo sakanana any ambany izay mety hahazo oksizena mihena. Raha mifanakaiky loatra ny tranom-borona, dia atahorana kokoa ny hiparitahan'ny aretina iray na ny fihanaky ny katsentsitra ka hiantraika amin'ireo tranom-borona mpifanila vodirindrina sy fiompiana.
Hamafiso ny fipetrahana an-tsokosoko mba hampihenana ny fiatraikany amin'ny tahiry dia sy famindrana aretina eny amin'ireo toeram-piompiana
Mba hampihenana ny loza mety hitranga amin'ny biosecurity amin'ny famindrana aretina amin'ny asa fambolena iray mankany amin'ny iray hafa, ny manam-pahefana mifehy dia tokony hametraka elanelam-potoana voatondro farany ambany anelanelan'ny toeram-pambolena> 500 m ref
Andraikitry ny mpandraharaha sy ny mpitantana ny fiompiana ny manara-maso ny fahasalaman'ny trondro ary manombana raha misy aretina na katsentsitra ireo trondro. Raha ny fihetsika trondro dia ireto toetra ireto dia mety hanondro aretina na katsentsitra: ny tsy fihinanan-tsakafo ara-dalàna, ny fiposahana (ny fihodinany amin'ny sisiny), ny fikosehana ny farany ambany, ary / na ny fihenan'ny herinaratra na ny fitrohana ny etona amboniny. Raha ny fambara ara-batana dia ireto toetra manaraka ireto dia mety hanondro aretina na katsentsitra: faritra malemy, kibo mivonto, maso mipoitra, faritra mihosin-dra amin'ny vombony, fanakorontanana na famafana ny ampahany amin'ny vatana, ary / na moka na fitomboana be loatra amin'ny vatana. ref
Araho sy firaketana ny fahita matetika sy ny haben'ny aretina sy ny mety maty rehetra
Mamolavola drafitra fisorohana aretina sy fanaraha-maso ara-pahasalamana ary araho ny kaody fanaraha-maso mahazatra
Mamolavola protokol biosecurity mba hampihenana ny fihanaky ny aretina amin'ny cages na biby hafa
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFisafidianana toerana sy fahaiza-mitondra ho an'ny fiompiana anaty ala sy amoron-dranomasinamanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFomba fitantanana tsara indrindra amin'ny fiasa ara-kolontsaina an-dranomasina any Karaiba US
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFampidirana ny fitantanana fahasalamana trondro
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFitantanana fahasalamana amin'ny trondro